Nhau - Zvishandiso zvemaski muchina wemagetsi clutch maitiro ayo ekuita uye musimboti unoshanda
Zvishongedzo zve mask muchina wemagetsi batira ayo mashandiro maitiro uye anoshanda musimboti
Hunyanzvi hwekuita uye musimboti wekushanda wemagetsi emagetsi clutch yezvishongedzo zvemaski muchina. Iyo yemagetsi clutch chinhu chakakosha chekugadzira chemaskini muchina. Iyo yakanaka yemagetsi clutch inogona kuvandudza mashandiro ekushanda kwemask muchina uye chengetedza iyo manpower yekambani uye zvemari zvinodhura. Kana iwe uchida kusarudza yakanaka Electromagnetic clutch, isu tinofanirwa kunzwisisa maitiro ayo ekuita uye musimboti unoshanda.
Zvishongedzo zve mask muchina wemagetsi clutch maitiro ayo ekuita
Kana iyo yazvino yashandurwa, simba remagineti rinogadzirwa uyezve iyo "armature" ndiro inobatanidzwa. Batira iri munzvimbo inobatanidzwa. Kana iyo yazvino ikatemwa, iyo coil haina kupihwa simba uye "armature" yakavhurika yakavhurika, uye batira iri mune isina kubatanidzwa mamiriro.
1.Gungano rakareruka uye kugadzirisa: Iyo ndeyechimiro chechimiro cheiyo magnetic field coil yakadzika mukati mebhora rinotakura, saka hapana chikonzero chekutora yepakati kati kana kushandisa kabhoni brashi, uye zviri nyore kushandisa.
2. Yekumhanyisa-mhinduro: Nekuti iri mhando yakaoma, torque inopfuudzwa nekukurumidza, uye zviito zviri nyore zvinogona kuwanikwa.
3, yakasimba mukurumari: yakanaka kupisa kupisa, uye kushandiswa kwepamberi zvinhu, kunyangwe kune yakakwira frequency uye yakanyanya simba kushandisa, yakasimba kwazvo.
4, chiito ichi ndechechokwadi: kushandiswa kwechitubu-chakaumbwa zvitubu, kunyangwe paine yakasimba vibration haizoburitse yakasununguka, yakanaka mukurumari.
Icho chinoshanda musimboti wemagetsi clutch yemasikisi muchina: chikamu chinoshanda uye chikamu chinotyairwa chemagetsi emagetsi chinoshandisa kupesana pakati penzvimbo dzekusangana, kana kushandisa mvura senge yekuparadzira svikiro (hydraulic coupling), kana kushandisa magineti kufambisa (remagetsi remagetsi batira ) kuendesa Iyo torque inobvumidza iyo miviri kuti iparadzaniswe kwechinguva kubva kune mumwe nemumwe, uye inogona kuve yakabatanidzwa zvishoma nezvishoma, uye zvikamu zviviri zvinotenderedzwa mukupindurana kune imwe neumwe panguva yekufambisa.
Iwo anoshanda musimboti wemagetsi clutch yezvishongedzo zvemaski muchina
Kuongororwa kwesimba rekushandisa remagetsi emagetsi clutch yezvishandiso zvemaski muchina: Iyo spline shaft kumagumo kwekutyaira shaft yakagadzirirwa neanoshanda yekukweshera ndiro, iyo inogona kufamba zvakasununguka munzira yeaxial. Nekuda kweiyo spline yekubatana, inozotenderera nechairi yekutyaira. Iyo inotyairwa yekukweshera ndiro uye yekutyaira kukwesheni ndiro zvakamisikidzwa zvakaturikidzana, uye iyo convex chikamu chekunze kumucheto chakanamatira mune ruoko rakagadziriswa neinotya giya, saka inotyairwa kukwesheni ndiro inogona kutevera inotyairwa giya, uye haigone kutenderera kana iyo kutyaira shaft inotenderera. .
Kana coil yasimbiswa, mahwendefa ekupesana anokwezva kune iyo simbi simbi, uye nhumbi inokwezvawo, uye ndiro yega yega yekukwesana inosvinwa kwazvo. Zvichienderana nekukwesana pakati patenzi uye anotyairwa kukweshera mahwendefa, iyo inotyairwa giya rinotenderera nechairi yekutyaira. Kana iyo coil yabviswa, iyo coil matsime akaisirwa pakati pemukati nekunze kupesana mahwendefa kudzoreredza nhumbi uye yekukweshera mahwendefa, uye batira inorasikirwa nemhedzisiro yekutumira torque. Imwe kumagumo eiyo coil inoisa DC simba kuburikidza nebrashi uye slip ringi, uye imwe mugumo inogona kugadzika.